Madaxweynaha Puntlland oo tababar u soo xiray Ciidamo ka tirsan Daraawiishta
July 12, 2012 - Written by
Madaxweynaha Puntland Dr.C/raxman Faroole ayaa maanta waxaa uu tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Puntlland oo in ka badan ilaa 4 bilood uu tababar uga socday xerada 54aad ee k u taal duleedka magaalada Garoowe. Xafladaan soo xiritaanka Tababarkaan ciidanka daraawiishta ayaa waxaa kale oo ka soo qayb galay Madaxweyne ku xigeenka Puntlland Gen.Cabdisamad Cali Shire, Wasiirka arrimaha gudaha Gen.Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilka-jiir, Wasiirka amniga Puntlland Gen Khaliif Ciise Mudan,Taliyaha ciidanka Daraawiishta Gen.Siciid Maxamed Xirsi Siciid Dheere iyo Saraakiil kale oo ka tirsan laamaha kale duwan ee ciidanka Puntlland.
Ciidanka Daraawiishta Puntlland ee tababarku ugu soo xirmay duleedka magaalada Garoowe ayaa waxaa ay sameeyeen dhoolatus ku saabsan qaabka ay ciidamadu u howl galaan ,gaado ka ciyaar ciidan iyo dabrid kale duwan, macalimiinta tababarka siiyey ciidankaan ayaa iyagu ku sugnaa goobta .
Madaxweynaha dowllada Puntlland Dr.Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa markii ay soo gabagabowday dhoolatuskii ay samaynayeen ciidanka ayaa waxaa uu khubada u jeediyey ciidanka isagoo kula dardaarmay in ay ciidanku sugaan amaanka Puntlland isagoo ku nuuxnuuxsaday in Puntlland ay leedahay cadow fara badan loogana fadhiyo ciidanku in ay u diyaar garoobaan difaac degaanada Puntlland iyo midnimada dallka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntlland Dr.Cabdiraxmaan Faroole ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka looga baahan yahay in ay noqdaan kuwo walaalo ah ayna ka fogaadaan qabyaalada ayna ilaaliyaan sharafta darayska tuutaha ah ee ay xiran yihiin. Ugu danbayntii ayaa Madaxweynaha Puntlland waxaa uu shahaadooyin iyo agab kale uu gudoonsiiyey qaar ka mid ah ciidanka daraawiishta ee tababarku u soo dhamaaday maanta.